UGAAR AH RAGGA: 6 Qaab oo aad ku qalbi jabiso Xaaskaaga adigoo aanan xitaa marna la hadlin | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»UGAAR AH RAGGA: 6 Qaab oo aad ku qalbi jabiso Xaaskaaga adigoo aanan xitaa marna la hadlin
Hani Osman Send an email January 3, 2019
Ragga badankood ma oga in qaar kamid ah dhaqamadooda ay burburin karaan xiriirkooda. Waxaa jira dhowr qaabood oo aadan ogeyn balse aad qalbiga uga jabiso haweeneydaada.
1. Waxaad waqti la qaadataa saaxiibadaa
Ninka waa u muhiim saaxiibadiis balse ma jiraan sabab ay saaxiibadaa ay wax walba uga soo hormaraan ama mudnaanta u yeeshaan. Waa qalad markaad waqti badan siiso saaxiibadaa intaad siin lahayd xaaskaaga ama lamaantaada.
Waa jabisay qalbigeeda waxaadna ka dhigtay mudnaanta labaad markaad waqti ka badan keeda aad siiso saaxiibadaa.
2. Ma rabtid lamaantaada
Haweeney kasta waxay dareentaa dhaawac haddii ay dareento in ninkeeda uusan rabin. Goorma ayuu ahaa waqtigii ugu dambeeyay ee aad shumiso? Goorma ayuu ahaa waqtigii ugu dambeeyay ee aad u sheegto inaad jeceshahay?
3. Haweenka kale ayaad indhaha la raacdaa adigoo iyada la socda
Waxay gabadha kaa rabtaa inaad u aragto gabadha ugu qurxan ee aad aragto balse sidaas kama dhigtid markaad haweenka kale ku dheeygagto oo isha la raacdo. Qalbi jab ayaad ku riday marka aadan indhahaaga ku koobi karin iyada kaliya.
4. Waxaad ka joojisay waxyaabihii macaana ee ay kaaga baratay
Ragga qaarkood waxay iska dhigaan kuwo u macaan haweenka maalmaha hore ee xiriirka taasoo ay joojiyaan marka ay haweeneyda uga barato. Taasi waa qalad waana mid qalbiga ka jabineysa markaad joojiso sameynta waxyaabihii macaanaa ee ay jeceleyd ee ay kaaga baratay.
5. Mar kasta waadka mashquushaa
Qalbi jab ayaad ku riday gabadha markaad had iyo jeer ka mashquusho inaad waqti la qaadato. Way ogtahay inay jiraan waxyaabo dhowr ah oo la dagaalamayo waqtigaaga balse waxay sidoo kale kaa fileysaa inaad waqti wanaagsan si joogta ah ula qaadato. Haka mashquulin inaad waqti wanaagsan la qaadato gacalisadaada.